Koodhka fiidiyowga VP9 ee bilaashka ah inuu diyaar ahaado bartamaha Juun | Laga soo bilaabo Linux
Koodhadhka fiidiyowga ee VP9 oo bilaash ah inuu diyaar ahaado bartamaha Juun
Google wuxuu qorsheynayaa inuu dhammeeyo qeexitaanka qeexitaanka VP9 video codec bisha Juun 17, taas oo u oggolaan doonta isticmaalkeeda dambe ee Chrome iyo ka dib YouTube.
WebM waa mashruuca Google ee loogu talagalay in lagu sii daayo fiidiyowga Webka, kaas oo maanta la silcaya xaddidnaanta waxyaabaha beddelka leh ee lahaanshaha. Waqtigaan la joogo, WebM waxaa ku jira fiidiyoo la duubay iyadoo la adeegsanayo VP8 iyo cod la adeegsanayo Vorbis. Nasiib darrose, sababo kala duwan awgood WebM ma noqon karin beddelaad khatar gelinaysa koodhka fiidiyowga maanta ugu xoogga badan: H.264.
Kuwa isticmaala H.264 hadda waa inay bixiyaan khidmadaha patent-ka. Ku-xigeenkiisa, HEVC aka H.265, wuxuu raacayaa isla qaabkii.
H.265 aad ayuu uga waxtar badan yahay H.264, oo wuxuu siiyaa tayada fiidiyowga ee la barbardhigi karo iyadoo la adeegsanayo kalabar tirada jajabyada halkii labaad Google iyo xulafadeeda, dhinacooda, waxay rajeynayaan inay gaaraan waxqabad la mid ah iyaga oo ka guuraya koodhka VP8 ee hadda una wareegaya VP9.
Sababtoo ah VP9 waxay sifiican ugudbisaa fiidiyowga VP8 codec, dhaqaaqu wuxuu noqon doonaa guul muhiim u ah fiidiyaha fiidiyowga, gaar ahaan marka la eego tirada aaladaha mobilada ee kuxiran internetka oo aan lahayn xawaare aad udegdeg ah.
Sikastaba ha noqotee, waxaan rajeynaynaa in VP9 uusan la kulmin weerarada sharciyeed ee VP8 (laga soo qaatay Nokia) ay ahayd inuu maro oo kahortaga, inbadan, adeegsiga baaxada leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Koodhadhka fiidiyowga ee VP9 oo bilaash ah inuu diyaar ahaado bartamaha Juun
koodhadhkani waxay u badan tahay inuu yeelan doono heerka h264, laakiin h265 hubaal wuu ka sarrayn doonaa.
Jawaab Francesco Diaz
Oo miyuu ka fiicnaan doonaa H.265? Sababta oo ah koodhadhkani wax badan buu ballan qaadayaa.
Ku soo jawaab Amarante
VP9 RC waa 1% ka xun yahay H.265 RTM, VP9 RTM waxay soo bixi doontaa 2 bilood oo dheeri ah. Waxaa qaadan doona Youtube iyo Android. VP9 iyo H.265 ficil ahaan waa isku mid, labaduba waxay adeegsadaan kala badh xawaaraha H.264 si ay u soo bandhigaan isla nuxur tayo wanaagsan leh. Dhinaca hoose ayaa ah inay labadooduba u baahan yihiin kombuyuutar ka awood badan sidii ay ugu ciyaari lahaayeen isla fiidiyowga H.264 (VP9 waxay u baahan tahay 78% PC ka awood badan H.265-na waxay u baahan tahay 83% PC ka xoog badan). Sikastaba, ficil ahaan dhamaantood waxay wataan processor wanaagsan iyo kaararka sawirada oo wata xawaareynta qalabka hadii la isticmaalo Linux ama windows 7/8. Marka dhibaato ma noqon doonto. Labaduba waxay bilaabi doonaan inay dadku isticmaalaan dhamaadka 2013.
Ku jawaab Franchic
VP9 RC wuxuu 1% ka liitaa waxqabad iyo xoogaa ka hooseeyaa H.265 oo ah nooca RTM ee Google I / O 2013 ee Mareykanka nooca ugu dambeeyana waxaa lagu sii deyn doonaa wax ka yar 2 bilood (dhamaadka bisha Juun) sidaas darteed waxaan u maleynayaa halkan ilaa halkaan VP9-ka ugu dambeeya wuxuu la mid noqon doonaa ama ka fiicnaan doonaa kan hadda socda ee H.265. Intaas waxaa sii dheer VP9 wuu furan yahay.
Inaad haysato haddii VP9 ay run tahay dhowaan maxaa yeelay fallaadh ku soo socota, waa buuxa full.
Kabtan, waxaan ubaahanahay waxqabad dheeri ah!
Ka hel dhammaan macluumaadka aad ka maleyn karto nidaamkaaga: dmidecode
Debian 7 "Wheezy" iyo QEMU-KVM